प्रवासी नेपालीमा स्वदेशमै फर्केर केही गरौं भन्ने भावना छ : दुर्गा गुरुङ ‘मिलन’ – Shuva News
प्रवासी नेपालीमा स्वदेशमै फर्केर केही गरौं भन्ने भावना छ : दुर्गा गुरुङ ‘मिलन’
Shuvanews ११ पुष २०७५, बुधबार January 11, 2019 1243 Views
पर्वत जिल्लाको बाजुङमा जन्मेर कर्मथलो हङकङ बनाउनुभएका दुर्गा गुरुङ ‘मिलन’ले आफ्नै पहलमा मिलन फाउण्डेशन, नेपाल नामक संस्था दर्ता गरेर सोही संस्था मार्फत् देशका विभिन्न स्थानमा सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा व्यक्तिगत कमाईबाट सहयोग गर्दै आउनुभएका गुरुङ समाजसेवामा लाग्नुमा बुबा र आफ्ना गाउँका अभिभावकको प्रेरणालाई मुख्य ठान्नुहुन्छ । उहाँले परिवार समेतको सहयोगमा विद्यालय, सामुदायिक भवन, बाटो, मठ मन्दिर निर्माणका लागि सहयोग गर्नुका साथै पुस्तकालय स्थापना, विद्यार्थीहरुलाई कपडा एवं शैक्षिक सामाग्री सहयोग, हरेक बर्ष फरक फरक स्थानमा स्वास्थ्य शिविर लगायतका कार्यक्रम गर्दै आउनुभएको छ । समाजसेवा मात्र नभई चलचित्र निर्माणमा समेत लाग्नुभएका मिलन फाउण्डेशनका संरक्षक गुरुङसँग शुभ न्यूजका लागि राज शर्माले गर्नुभएको कुराकानी ।
प्रवासमा बसेर पनि स्वदेशमा विभिन्न सामाजिक काममा संलग्न हुनुहुन्छ ? के कारणले समाजसेवामा संलग्न हुन प्रेरणा मिल्यो ?
समुदायमा रहेपछि विभिन्न समस्याहरु देखिन्छ, त्यस्ता समस्या देखेपछि आफूले पनि केही गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता विकास भएको हो । विशेष गरी आफ्ना गाउँमा बाटोघाटो, खानेपानी, सरसफाई मठमन्दिर लगायतमा आर्थिक मात्र नभई भौतिक रुपमा समेत सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो ।
मेरो बुबाले पनि गाउँ समाजमा थुप्रै सामाजिक कार्य गर्नुभएको थियो । विद्यालय, बाटोघाटो, मठमन्दिर निर्माणमा उहाँको सक्रियता थियो । मेरा अभिभावकहरु पनि गाउँका समस्या आफूले बुझेर पनि सहयोग गर्नुपर्दछ भनेर लागेको पाएको थिए । खास गरी बुबा र गाउँका अभिभावकको प्ररेणाले गर्दा समाज सेवामा लागेको हो । यसमा मेरो परिवारको पनि साथ रहेको छ ।
सहयोग गर्नुपर्ने क्षेत्र चाँही कसरी पहिचान या छनौट गर्नुहुन्छ ?
कतिपय समस्याहरु हामी आफैंले पनि देखेका हुन्छौं । हाम्रो संस्थाका साथीहरुले पनि समस्या भएका स्थानका बारेमा छलफल गर्नुहुन्छ र समझदारी कायम गरेर सहयोग गर्ने गरेका छौं । कतिपय स्थानमा भने साथीभाईहरु मार्फत् सहयोगका लागि अनुरोध हुने गरेको छ । हामीले संस्थामा छलफल गरेर नै सहयोग गर्दै आएका छौं ।
समाजसेवाका विभिन्न क्षेत्र छन् मुख्य रुपमा के मा केन्द्रित हुने गर्नुभएको छ ?
हामीले ८–१० बर्ष पहिलादेखि समाजसेवामा सक्रियता बढाएका हौं । मेरो आफ्नै टाइटल नाम ‘मिलन’बाट नै मिलन फाउण्डेशन नेपाल पर्वत जिल्लामा दर्ता गरेका छौं । ५ बर्षदेखि वैधानिक रुपमा मिलन फाउण्डेशन मार्फत् नै सबै काम गर्दै आएका छौं । पछि मिलन ट्रष्टमा परिवारकै तर्फबाट अक्षयकोष जम्मा गर्ने र व्याज रकमबाट दीगो रुपमा समाजसेवाका काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्दैछौं । व्याजबाट प्राप्त हुने रकमले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका असक्त असहाय पिछडिएका वर्गमा विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सहयोग गरेका छौं ।
खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रित सहयोगलाई गरेका छौं । स्वास्थ्य शिविरहरुमा प्राय ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लाभ लिनुहुन्छ । शैक्षिक सामग्री वितरण गर्दा विद्यार्थीहरुले पाउने नै भए । यसका साथै प्राकृतिक प्रकोपका बेला राहत वितरण गर्दै आएका छौं ।
हरेक बर्ष आँखा शिविर र स्वास्थ्य शिविर गर्ने गरेका छौं । त्यस्ता शिविरमा २५० देखि ६०० जनासम्मले आँखाको परीक्षण गर्ने गरेका छन् भने १२ देखि २० जनासम्मको हरेक बर्ष मोतियाविन्दु या जलविन्दुको अपरेशन गर्ने गरिएको छ । शिविरमा आउने विरामीहरुको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च मिलन फाउण्डेशनले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।
समाजसेवाका दौरान कुनै समस्या भोग्नुभएको छ ?
समाजसेवा गर्दा विभिन्न समस्या आउने गर्दछन् । मेरो भोगाईमा सहयोग गर्न जाँदा जुन ठाउँमा सहयोग गर्न गयो उक्त स्थानका महानुभावहरुले कहिलेकाँही आर्थिक रुपमा कतैबाट ल्याएका होलान् भन्ने धारणा राख्छन् ।
कतिपयले आफ्नो जन्मथलोमा धेरै गरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । सामजिक क्षेत्रमा क्रियाशील भएपछि आफ्नो गाउँमात्र नभई देशभर वा बाहिरसमेत समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।हाम्रो संस्थाले आफ्नो गाउँमात्र नभई जिल्ला र मुलुकका विभिन्न स्थानमा समस्यामा परेका नागरिकलाई समान रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
स्थानीय भएको हिसावले गाउँमा भन्दा पनि अन्यत्र मात्र चासो दिएको भन्ने खालको धारणा आउने गर्दछ । तर हामीले लमजुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, कुश्मा, गोरखा लगायतका स्थानमा सहयोग कार्यक्रम लिएर गएका छौं । समाजसेवाका लागि निश्चित घेरा बनाउनु भन्दा पनि आवश्यक पर्नेलाई सहयोग गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ ।
संस्थाले कसरी सहयोग गरिरहेको छ, रकम कहाँबाट आएको छ । विदेशबाट आएको पैसा हो, कति आफैंले राखेका होलान् भन्ने खालका भावना समेत अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्त हुने गरेको पाएका छौं । यसमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले आफ्नो परिवारको कमाईबाट नै सामाजिक सेवामा काम गर्दै आएका छौं । बाहिरको सहयोग लिएका छैनौं ।
राम्रो काम गर्दागर्दै र आफ्नै कमाईबाट निस्वार्थ सहयोग गर्दा पनि यस्ता विचारहरु आउँदा कहिले काँही दुःख लाग्दो रहेछ । यद्यपि निस्वार्थ रुपमा र सही ढंगले सहयोग गर्दा त्यस्ता विचारले केही फरक पार्दैन भन्ने ठान्छु ।
प्रसङ्ग बदलौ, तपाईंले चलचित्र पनि बनाउनुभएको छ । चलचित्र र समाजसेवा सम्बन्धित भएर हो कि के कारणले निर्माण गर्नुभएको ?
चलचित्र निर्माण पनि समाजसेवाकै एउटा पाटो हो । चलचित्र मार्फत् गुरुङ भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य र भेष भुषाको संरक्षण एवं जर्गेनामा हामीले ध्यान दिएका छौं । चलचित्र निर्माणबाट कलाकारहरुलाई रोजगारी, आफ्नो कला संस्कृति, गाउँ ठाउँको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक ठाउँलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौं ।
भावी पुस्तालाई चलचित्र माफत् कला, भाषा, संस्कृति संस्कारलाई जानकारी दिने उद्देश्य राखेका छौं । हामीले बनाएको चलचित्र ‘भेडी गोठाले’ मार्फत् आम्दानी भएको जति पनि रकम छ हामीले सबै सामाजिक सेवामा खर्चने निर्णय गरेका छौं ।
शुरुमा लमजुङमा क्याँेवी धि (गुरुङ समुदायको पवित्र धर्मस्थल) निर्माणका लागि च्यारिटी गरिएको थियो । लमजुङ, कतार र साउदीमा च्यारिटी सो गरेर करिव ८ लाख रकम संकलन भएको थियो सो रकम धर्मस्थल निर्माणमा सहयोग प्रदान ग¥यौं । त्यसका साथै तमु प्हे लु संघ युकेले गरेको च्यारिटीमा पनि ४ लाख नेपाली रुपैयाँ संकलन भयो । मैले व्यक्तिगत रुपमा समेत ५०० पाउण्ड थप गरेर प्हे लु संघलाई सहयोग गरियो ।
फिल्म मार्फत् के सन्देश दिन खोज्नुभएको छ ?
फिल्ममा पुराना धार्मिक अन्धविश्वासलाई तोड्नुपर्दछ, नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी पेशा व्यवसाय गरेर बस्नुपर्दछ भन्ने भावनाका साथै भेडी गोठ सम्बन्धि गुरुङ समुदायको चाल चलनलाई जीवन्त रुपमा उठाइएको छ ।
यसका साथै एउटा महिला विधवा भएपछि समाजमा कसरी सशक्त रुपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ भनेर महिला सशक्तीकरणको पाटोलाई पनि जोडदार रुपमा उठाएका छौं । यसले पुरातन मुल्य मान्यतालाई चुनौति दिएको छ । खासगरी महिलालाई श्रीमानको निधन भएपछि अवाला ठान्ने या कमजोर ठान्ने सोचलाई बदल्नुपर्दछ र उसले पनि समाजमा योगदान गर्न सक्छ, आफ्नो जीवनलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने विषय समेत चलचित्रमा समावेश छ ।
चलचित्र निमार्ण र यसमा दर्शकहरुले देखाउनुभएको माया ममताप्रति ‘भेडी गोठाले’ चलचित्र युनिट कृतज्ञ छौं । यसका साथै हङकङमा च्यारिटी गरेर मिलन ट्रष्टमा सामाजिक कार्यका लागि १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छौं । उक्त कोषमा ५० लाख मुद्दति रकम जम्मा गर्ने लक्ष छ । जसले गर्दा सामाजिक कामलाई निरन्तरता दिन सहज होस् भन्ने चाहन्छु ।
प्रवासमा रहेर नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति के कस्तो धारणा बनाउनुभएको छ ?
नेपालमा पछिल्लो समयमा शान्ति र स्थिरताको अवस्था छ । अहिले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले आर्थिक रुपमा पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था विकास भएको छ । नेपालीहरुले राम्रै आय आर्जन गरेका छन् । उक्त आय आर्जनलाई नेपालमै लगानी गरेर अगाडि बढ्ने सोच प्रवासमा रहेका नेपालीहरुमा विकास भएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।
मलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा स्वदेशमा नै केही पेशा व्यवसाय या उद्यम गर्ने भन्ने सोचाई छु । प्रवासमा रहेका अन्य साथीभाईहरुमा पनि स्वदेशमा उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको र फर्केर केही उद्यम, व्यवसाय गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको पाएको छु ।
मानव भएर जन्मिसकेपछि आफू मात्र नभई समाज र मुलुकका लागि सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ । मैले यही मान्यताका साथ समाज सेवाका कार्यमा संलग्न हुँदै आएको छु । अन्य नेपाल दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई पनि समाज सेवाका काममा सरिक हुन आग्रह गर्दछु । यसका साथै गुरुङ समुदायको ल्होसार पर्वका अवसरमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । शुभ न्यूज परिवारलाई यो अवसर दिनुभएको धन्यवाद ।